Bogga ugu weyn Bartilmaameedku ma iibiyaa kaadhadhka hadiyadaha ee Amazon? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Nasiib darro, laga bilaabo 2022, Target kama iibin kaararka hadiyadda Amazon mid ka mid ah bakhaarradeeda ama khadka tooska ah. Bartilmaameedka waxa ay iibisaa kaarar hadiyadeed oo kala duwan, oo u dhexeeya safarka iyo madadaalada ilaa dukaamaysiga iyo makhaayadaha, laakiin kaadhadhka hadyada Amazon lama heli karo.
Bartilmaameedku waa meel aad u fiican oo lagu socodsiiyo hawlaha sababtoo ah waxay leedahay noocyo kala duwan oo qiimo jaban ah iyo alaabooyin, iyo sidoo kale xulasho ballaaran oo kaararka hadiyadda ah oo laga dooran karo.
Iyada oo dhammaan fursadaha Target ee kaararka hadiyadda ee tafaariiqda ugu caansan, waxaa laga yaabaa inaad la yaabto haddii ay iibiso kaararka hadiyadda Amazon. Waa tan waxa aan ogaaday ka dib markii aan sameeyay baadhitaan.
Amazon waa tafaariiqda ugu weyn adduunka, iibinta ku dhawaad ​​wax kasta oo aad rabto ama u baahan karto.
Marka aadan si sax ah u helin waxa aad ka raadinayso Bartilmaameedka degaankaaga, waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad online ka dalbato.
Haddii aad u socoto Target raadinta kaarka hadiyadda Amazon, waxaa laga yaabaa inaad niyad jabto.
Sii wad akhri si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaararka hadiyadda ee Target iyo meelaha kale si aad u hesho kaararka hadiyadda ee Amazon.
Bartilmaameedku ma iibiyaa kaadhadhka hadiyadaha ee Amazon?
Maxay tahay sababta uu bartilmaameedku u diiday inuu iibiyo kaadhadhka hadiyadaha ee Amazon?
Waa maxay Kaadhadhka Hadiyada ee Bartilmaameedku Iibiyaa?
Ma isticmaali kartaa Kaararka Hadiyada Amazon Markay Tahay Bartilmaameedka?
Haddaba, halkee ayaan ka iibsan karaa Kaararka Hadyada Amazon?
Targetku ma qaataa Kaadhadhka Hadiyada lacag caddaan ah?
Iibinta Kaarka Hadiyadaada Online
Beddelka Kaadhka Hadyadaada
Dib u iibinta Walxaha Bartilmaameedka
Sideen ugu badali karaa kaadhka hadyada bartilmaameedka ah ee lacag caddaan ah?
Wax online ah ma ku iibsan kartaa kaadhka hadiyadeed ee bartilmaameedka ah?
Faa'iidooyinka Iibsashada Laga Yimid Bartilmaameedka
Bartilmaameedka kama iibinayo kaadhadhka hadyada Amazon mid ka mid ah bakhaaradiisa ama shabakadeeda.
Sababtoo ah Amazon waxay la dagaalantay badi dukaamada, waxaa suurtogal ah inaadan ka heli doonin mid ka mid ah kaararkooda hadiyadda dukaanka jireed.
Kaararka hadyada Amazon waxaa laga heli karaa tiro xadidan oo dukaamo ah.
Walgreens, Best Buy, 7-Eleven, Dollar Family, Wegmans, iyo Winn-Dixie dhamaantood waxay iibiyaan kaadhadhka hadyada Amazon.
Waxa kale oo aad akoon ka samaysan kartaa bogga Amazon adiga oo isticmaalaya macluumaadka kaadhka deynta aasaasiga ah oo si toos ah uga iibso.
Haddii aad raadinayso hab aad wax uga iibsato Amazon at Target, waxaa jira xal.
Bartilmaameedka ma iibiyo kaararka hadiyadda ee Amazon, si kastaba ha ahaatee, waxay iibiyaan kaararka hadiyadaha kale sida American Express iyo MasterCard.
Waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah kuwan si aad uga dukaameysato Amazon.
Macaamiil kastaa ma jecla inuu galo macluumaadka kaadhka deynta ee bogga internetka, gaar ahaan marka la eego khatarta jebinta amniga.
Ma rabtid hacker-ku inuu gacmahooda ku helo xogta xasaasiga ah.
Natiijo ahaan, dukaameystayaal taxaddar leh ayaa laga yaabaa inay rabaan inay iibsadaan kaararka hadiyadda oo ay ka geliyaan macluumaadka kaadhka hadiyadda beddelkeeda.
Baadhid: Ma ku isticmaali kartaa Kaararka Hadiyada Visa ee Amazon?
Bartilmaameedka (sida tafaariiqda kale sida Walmart iyo Costco) kama iibiyaan kaadhadhka hadiyadaha Amazon mid ka mid ah dukaamadeeda sababtoo ah ma rabto inay lumiso macaamiisha.
Intaa waxaa dheer, marka la eego in Target ay iibiso waxyaabo badan oo isku mid ah oo la mid ah Amazon, waxay macno u leedahay shirkadu inay rabto inay ka hortagto kharash kasta oo suurtagal ah inuu ka tago dukaamadeeda.
In kasta oo tani ay dhib ku noqon karto dukaamaysiga Target, gaar ahaan haddii aad raadinayso hadiyad, waxaa jira kaarar kale oo dhowr ah oo aad ka iibsan karto oo aad ku dukaamaysan karto halkaas oo aad ka heli karto kaadhadhka hadyada Amazon (hoos ka eeg!)
Arag sidoo kale: Halkee laga Iibsan karaa Kaararka Hadiyada ee Bartilmaameedka 2022
In kasta oo xaqiiqda ah in Target uusan iibin kaararka hadiyadda ee Amazon, isticmaalayaashu waxay wali iibsan karaan noocyo kale oo kaararka hadiyadeed ah.
Kaararka hadiyadda waxaa laga heli karaa dukaanka ama online at Target.com, iyo macaamiishu waxay ku iibsan karaan xaddi lacageed oo kala duwan nooc kasta oo kaar ah.
Bartilmaameedka waxa kale oo uu iibiyaa kaadhadhka hadyada oo ah qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan kaadhadhka jireed, kaadhadhka eGift, iyo in ka badan.
Asal ahaan, Target waxa ay sidataa walxaha soo socda, iyo kuwa kale:
American Express kaararka hadiyadda
kaadhadh hadiyadeed warshad cheesecake
Chipotle kaararka hadiyadda
Makhaayadaha Darden kaadhadh hadiyadeed
Kaararka hadyada ee Disney
Kaararka hadiyadda ee Domino's Pizza
DoorDash kaararka hadiyadda
kaararka hadiyadda eBay
Kaararka hadiyadda ee Google Play
Grubhub kaararka hadiyadda
Hotels.com kaadhadh hadiyadeed
Hulu kaararka hadiyadda
Kaararka hadiyadda ee Lowe
Lyft kaararka hadiyadda
Mastercard hadyada kaararka
Kaararka hadyada ee Match.com
Michaels kaararka hadiyadda
Kaararka hadiyadda ee Netflix
Nintendo eShop kaararka hadiyadda
Nordstrom kaararka hadiyadda
Panera kaadhadhka hadiyadda
PlayStation Store kaadhadh hadiyadeed
Ribbon Box kaararka hadiyadda
Roblox kaadhadh hadiyadeed
Hubi Sidoo Kale: Sida Loo Bixiyo Deynta Kaadhka Amaahda Ah | Xeeladaha Ugu Fiican
Maya, kuma isticmaali kartid kaadhadhka hadyada Amazon ee Target ama mareegta Target.
Markaad iibsato kaarka hadiyadda, waxaad siisay shirkad magaceeda ku qoran lacagta kaadhka si ay wax uga hesho dukaankooda.
Kaararka hadiyadda ee loop-xiran iyo loop-furan waa labada nooc ee kaararka hadiyadda.
Kaararka hadiyadaha ee loogu talagalay bakhaar gaar ah ayaa badanaa ah kaarar hadiyadeed oo xiran, taasoo la macno ah inaad ku isticmaali karto oo keliya dukaankaas.
Sababtoo ah laba ama in ka badan oo goobood, sida Babies R Us iyo Bed, Bath & Beyond, waxaa iska leh dad isku mid ah, kaarar hadyad xiran oo xiran ayaa wali ka shaqeeya tafaariiqda kale.
Kaararka hadyada ee American Express iyo Mastercard waa tusaalayaal kaadhadhka hadyada furan ee furan.
Ilaa inta uu aasaasku leeyahay kaadhka akhriyaha, kuwaas waxa loo isticmaali karaa lacag ahaan.
Kharashka hawlgelinta, oo badanaa ku dhow $5, waa sida ganacsiyadani lacag u sameeyaan.
Dadka aan aqoon u lahayn boorsooyinka dhijitaalka ah ama kaararka hadiyadda waxaa laga yaabaa inay ku adkaato isticmaalka marka loo eego kaararka hadiyadda ee dhabta ah.
Kaarka hadiyadda dhijitaalka ah ayaa aad uga sahlan in lagu qaldo badda iimaylada marka loo eego gabal yar oo caag ah oo ku habboon boorsada kasta.
In kasta oo dhibtu jirto, kaadhadhka hadiyadaha dhijitaalka ah ayaa noqda kuwa caan ah.
Akhri Sidoo kale: 15 Kaararka Amaahda Ugu Fiican ee Bilawga Sanadka 2022
Marka, halkee baan ka iibsan karaa Amazon Gift Cards?
Siinta qof kaarka hadiyadda Amazon waxay la mid tahay in la siiyo dhar, cunto, qalab kalluumaysi, qashinka bisadaha, baytariyada AA, ama mid kasta oo ka mid ah malaayiinta shay ee kale ee uu bixiyo tafaariiqda weyn ee internetka.
Si kale haddii loo dhigo, haddii wax aan laga heli karin Amazon, waxay u badan tahay inaan laga heli karin meel kale oo meeraha ah. Markaa ha dareemin xumaan in Target aanu iibin kaadhadhka hadyada ee Amazon.
Marka, dadka intooda badan waxay weydiiyaan, halkee ka heli karaa kaararka hadiyadda Amazon? Xalka waxaa laga heli karaa ficil ahaan meel kasta.
Waxaa jira in ka badan 26 bakhaar oo bixiya kaadhadhka hadyada Amazon oo ka bilaabma xarafka "B" ee liiska tafaariiqda iibiya kaararka hadyada Amazon.
Waxaa lagu iibiyaa 48 dukaan oo leh magacyo ka bilaabma xarafka "S." Zip Zone Express Inc., tusaale ahaan, waa dukaanka "Z".
Barnes iyo Noble, Safeway, iyo 7-11 waa dhowr ka mid ah dukaamada caanka ah ee bixiya kaadhadhka hadiyadaha ee Amazon, waxaadna had iyo jeer hubin kartaa liiska Amazon si aad u aragto cidda kale ee iibinaysa.
Si kastaba ha ahaatee, Amazon.com waa goobta ugu fudud ee lagu iibsado kaarka hadiyadda Amazon, kaas oo lagu heli karo magacyo go'an oo ah $10, $25, $50, iyo $100 (inkasta oo laga yaabo inaad sameyso hadd-sheeg ah oo qiimaheedu u dhaxeeyo $25 ilaa $500).
XIDHIIDHKA: Sida Loo Sameeyo Kadhka Debit
Waxaad ka dalban kartaa saddex nooc oo kaararka hadiyadda ah bogga Amazon:
Kuwan waxaa si toos ah loogu diraa ciwaanka iimaylka qaataha waxaana laga soo furan karaa akoonkooda Amazon.
Kuwan waa la daabici karaa oo lagu ridi karaa baqshad si loo taabto shakhsiyad dheeraad ah, sida magacaba ka muuqata.
Waxaad ka dalban kartaa kaarka hadiyadda ee Amazon onlayn oo aad heli karto kaarka dhabta ah maalinta xigta, iyada oo aan lahayn kharash dheeraad ah ama kharash bixinta.
Haddii aad doorbidayso inaad soo dirto hadiyad dhab ah, waxaad ka iibsan kartaa kaadhadhka hadiyadaha Amazon ee dukaamada leben-iyo-hoobiye ee kala duwan.
Kaararka hadyada Amazon ee laga iibsado intarneedka way fududahay in la bixiyo: waxaad ka iibsan kartaa "eGift" kaarka onlayn oo si toos ah ugu soo geli sanduuqa emailka ee qaatahaaga.
Akhri Sidoo kale: Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadda ee Amazon oo Lacag La'aan ah: 24 Tricks si aad u hesho $ 100 Off 2022
Bartilmaameedka miyuu qaataa Gift Cards Lacag caddaan ah?
Way kala duwan tahay. Waxaad haysataa doorashooyin kala duwan oo aad ku cadaadin karto kaadhka hadyada Target marka aad hubiso hadhaaga soo hadhay. Waxaa suurtagal ah in:
Ku iibi kaadhka hadyada onlayn
Beddel kaadhka hadyada
Dib u iibi alaabada Bartilmaameedka
Waxaad u baahan doontaa samir iyo rabitaan ah inaad qaadato qayb ka mid ah lacagta soo hadhay haddii aad kaarkaga internetka ku iibiso. Sidan ayaa loo sameeyay:
Soo hel mareegta iibiye-ka fiirso boggaga iibiyeyaasha ee soo muuqda marka aad mid u ugaarsanayso. Kahor intaadan iibin kaarka hadiyadda, hubi inaad sameyso shaqada gurigaaga.
Ku tax kaadhka hadyada suuqa-Suuqyada kaadhadhka hadiyadda waxaa laga yaabaa in laga helo goobo badan oo online ah, oo ay ku jiraan Reddit, eBay, iyo Facebook. Kaarkaaga dhig iib oo sug iibiye.
Haddii aad ku nooshahay gobol ay ka jiraan dukaamada Coinstar, hel mid, geli kaarka hadiyadda mashiinka, oo hel lacag caddaan ah.
Kaliya 80% lacagaha ku haray kaadhkaga ayaa laguu soo celin doonaa.
Waxay qaadan kartaa wakhti dheer in aad alaab ka soo iibsato Target oo aad ku iibiso lacag caddaan ah, gaar ahaan haddii aadan haysan dheelitirnaan kugu filan si aad u sameyso macaamil sax ah.
Haddii ay taasi dhacdo, waxaad sugi kartaa iibka ka dibna sii wad xeeladda.
Akhri Sidoo kale: 15 Siyaabood Oo Loogu Heli Karo Kaararka Hadiyadaha iTunes Si Xalaal Ah Sanadka 2022
Kaararka hadyada bartilmaameedka ah laguma soo furan karo lacag caddaan ah ilaa sharciyada gobolka ay u baahan yihiin mooyaane.
But, you can obtain money for your gift card if you live in Puerto Rico or one of the 11 cash-back states. There’s no need to be concerned if you don’t—DoNotPay can help!
You can quickly exchange your Target gift card for cash with the Gift Card Cash Back program. The amount you can get back is determined on the cashback state where Target has a location.
Haa, Kaadhka GiftCard ee Target waxa loo isticmaali karaa wax iibsiga onlaynka ah, laakiin kaliya Target.com. Waxaad ku bixin kartaa ilaa toban kaararka Gift Card ama eGiftCard dalabkiiba marka aad isticmaaleyso hubinta Target.com.
Si aad u soo furato iimaylka iyo kaadhadhka hadiyadaha mobilada ee dukaanka iyo khadka, waa inaad marka hore samaysaa akoon Target.com
Bartilmaameedka wuxuu aqoonsan yahay inuu yahay urur weyn oo saameyn la mid ah ku leh adduunka ku xeeran.
Waxay ku faanaan waxqabadyada mas'uuliyadda bulshada, oo ay ku jiraan in la baaro qayb kasta oo ka mid ah shirkadda si loo go'aamiyo sida ay saameyn ugu yeelan karto.
Muhiimada koowaad ee yoolku waa horumarinta iyo kor u qaadida alaabta deegaanka u saaxiibka ah.
Alaabooyinka la beegsanayo ayaa xiraya meelaha qashinka lagu shubo iyo kuwa wasakhaysan ilaha biyaha.
XIDHIIDHKA: 20ka Kaararka Hadiyadaha ugu Fiican 2022
They understand that they can’t rely on every customer to properly dispose of their items, so they’re working to develop and offer things that are better for the environment.
Arrinta sii jiritaanku waxay dhaafsiisan tahay wax soo saarkooda ilaa dhammaan wasakhowga ay soo saaraan bakhaaradooda, bakhaaradooda, iyo warshadahooda.
Target has joined the United Nations Global Impact initiative “Business Ambition for 1.5C” in an effort to reduce its emissions.
Ciribtirka qashinka waa yoolka labaad ee Target. Bartilmaameedka waxa uu saxeexay Ballanqaadka Caalamiga ah ee Dhaqaalaha Cusub ee balaastikada sanadka 2018 waxana uu si balaadhan u maalgalinayaa cilmi baadhista baakadaha waara.
Marka la gaaro 2030, shirkadu waxay rajaynaysaa in ay si buuxda ugu xoojiso tamarta la cusboonaysiin karo.
Target’s third mission is to assist more individuals to have equitable access to opportunities.
Bartilmaameedka ayaa awoodiisa isugu geynaya la shaqaynta ganacsiyada ay maamulaan dad aad u tiro badan.
Dhanka kale, Target's Racial Equity Action and Change Committee ayaa ka caawiyay qorista ganacsiyo badan oo ay leeyihiin dadka madowga ah iyo shaqaalaha African-American ah.
Bartilmaameedka ayaa sidoo kale amray in dhammaan alaab-qeybiyeyaasheeda ay yeeshaan siyaasadaha sinnaanta jinsiga marka la gaaro 2030ka.
Tani waxay ka dhigan tahay in alaab-qeybiyaha uu leeyahay habraacyo lagu caawinayo qoritaanka iyo horumarinta shaqaale badan oo kala duwan, iyo sidoo kale bixinta wadooyin warbixineed oo qarsoodi ah oo loogu talagalay xadgudubka, dhibaateynta, iyo weerarka.
Hadafka Bartilmaameedka waa in la helo isku-dhaf caafimaad qaba oo rag iyo dumar ah oo ka shaqeeya heer kasta.
Kaararka hadyada bartilmaameedka ma lagu iibiyaa Walgreens?
Haa, laga bilaabo 2022, inta badan goobaha Walgreens waxay iibiyaan kaadhadhka hadiyadda ee Target ee magacyo ah $25, $50, iyo $100, iyo sidoo kale kaararka madaahibta furan ee u dhexeeya $15 ilaa $500. Kaararka hadyada bartilmaameedka ah lagama heli karo onlayn waxayna ku kala duwan yihiin helitaanka dukaan ilaa kayd.
Bartilmaameedka ma iibiyaa Kaararka Pokémon?
Ka dib markii ay ka saareen kaararka Pokémon khaanadaha badbaadada macaamiishooda iyo shaqaalahooda, Target wuxuu bilaabay inuu iibiyo. 1-dii Juunyo, waxay dib u bilaabeen iibinta kaararka Pokémon.
Si kastaba ha ahaatee, Target ayaa qorsheeyay in kaliya lagu iibiyo kaararka Pokémon online.
Walmart ma iibisaa kaadhadhka hadiyadaha ee bartilmaameedka ah?
Laga bilaabo 2022, Walmart hadda kama iibiso Kaadhadhka hadiyadda Target ee dukaanka ama onlaynka Walmart.com. Macaamiisha waxay bedelkeeda ka iibsan karaan Kaararka Hadiyada Visa Walmart, kuwaas oo loo isticmaali karo Target. Macaamiisha waxay sidoo kale ka iibsan karaan Kaararka Hadiyada Target ee dukaamada Walgreens, Kroger, iyo Rite Aid.
Waa maxay sababta Walmart u iibinayn kaadhadhka hadiyadda ee bartilmaameedka ah?
Haddii aad aqoon u leedahay ganacsatada jumlada ah ee Maraykanka, waxaad ogaan doontaa in Walmart ay si degdeg ah u kordhinayso dakhligeeda sannadlaha ah, oo ka saaraysa tartamayaasha sida Target. Walmart kama iibiso kaararka hadiyadaha ee noocyada tartamayaasha sida Home Depot, Costco, Old Navy, Amazon, eBay, iyo kuwa kale si ay u sii wataan faa'iidadooda.
Dukaanka dhexdiisa ama khadka tooska ah, Target ma iibiyo kaadhadhka hadyada ee Amazon. Si kastaba ha ahaatee, waad baari kartaa oo iibsan kartaa mid kasta oo ka mid ah kaadhadhka hadiyadaha kale ee Target ee wax iibsiga, makhaayadaha, safarka, madadaalada, iyo isticmaalyo kale duwan oo kala duwan.
Kaararka hadyada Amazon waxaa laga iibsan karaa meelo kala duwan, oo ay ku jiraan Safeway iyo 7-11, iyo sidoo kale toos Amazon.com, qaddar kasta.
thecoldwire.com – Bartilmaameedku ma iibiyaa kaadhadhka hadiyadaha ee Amazon? (Wax walba oo lagu ogaado)
africa.businessinsider.com - Halka aad ka iibsan karto kaadhadhka hadiyadaha ee Amazon, iyo sida loo habeeyo si ay u sameeyaan hadiyadda ugu fiican
querysprout.com – Bartilmaameedku ma iibiyaa kaadhadhka hadiyadaha ee Amazon?
Kaarka Hadiyada Lacag Kaga Gudbi Akoonka Bangiga | Hagaha
Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadaha iTunes ee Bilaashka Ah Oo Aan Sahan Lahayn
Dib u eegisyada Caymiska Nolosha Salaanka 2022: Faa'iidooyinka & Khasaaraha | Sharci & Fadeexad | Sida ay u shaqeyso
Sida Fudud Loogu Helo Kaarka Debit Card
Iyadoo kobaca hadda jira ee qaababka lacag bixinta. Kaarka deynta ayaa hadda noqday mid si aad ah loo hagaajiyay iyada oo…
Heerka dusha sare, labada kaadhadhku waxay u muuqan karaan kuwo isku mid ah. Si kastaba ha ahaatee, marka la eego ujeedada iyo shaqada, labada kaadh…
20ka Meel ee ugu Wanaagsan ee lagu Iibin karo Kaararka Kubadda Koleyga 2022
Kaadhadhka kubbadda kolayga waxa ay noqon karaan kuwo si heer sare ah loo qaado. Dukaamo qadiimi ah oo badan ayaa ka kooban noocyo badan oo kaarar baseball ah. Hal sabab…
Kaararka hadiyaddu waxay leeyihiin sumcad xun, laakiin waa mid aan loo baahnayn. Ka dib oo dhan, qof kastaa ma rabo inuu ku daro…